हेर्दै माया लाग्ने एक बृद्धा महिला माथि बोक्सी आरोप लागेको छ। झापाको मेचिनगर ९ की एक ८१ बर्षीय बृद्ध आमालाई बोक्सीको आरोप लागेको हो । नजिकै रहेकी छिमेकी एक स्थानीय महिलाले बृद्ध आमालाई नाटकीय शैलीमा आफ्नै छिमेकीले आरोप लगाएको हो। बोक्सी भनेर यसरि एक असहाय बृद्ध महिला आरोप लगाइनु कति सम्मको अन्याय हो ?
नजिकै रहेकी छिमेकी बिरामी भएपछि उपचारको क्रममा गाँउमै रहेकी एक माताकोमा र्पुयाईएको थियो ।केही महिना अघि सोही ठाउँमा माता बनेर उपचार गर्दै आएकी अधिकारी थरकी माताले उपचार गर्ने वहानामा ति बिरामीलाई कुटपिट मात्र होइन, जवरजस्ती को होस कस्लाई खाईस भन्दै प्रश्न गरेको भिडियो समेत देख्न सकिन्छ । यति मात्र होईन चक्कु देखाउँदै कपाल जगटेको भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ ।
यता माताको भेषमा जवजस्ती बहकाउँने माताले माफी माग्न मानिन्न उनले मात्र के भनीन् भने मेरो काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गछु । भन्दै पन्छिन् ।यता पिडित बृद्ध आमाले आफुलाई लागेको भाम्रक आरोपले मर्ने बेलामा दाग लागेको बताईन् । उनले यो दाग मेटाउन सकिन्न । बिना प्रमाण मलाई यो अवस्थामा लागेको आरोप मा म न्याय खोज्न कहाँ जाउँ भन्दै आखा भरी आशुँ बनाउँदै पिडा पोखिन् । यस्ता समाजमा माताको भेषमा कोहीँ बिरामीलाई बहकाउँदै कसैलाई अनावश्यक आच पुग्ने काम गर्ने व्यक्ति प्रति अव कस्तो कारबाहीँ हुन्छ ? के यो कानुनमा कसैलाई प्रमाण बिना बोक्सीको आरोप लगाउने अधिकार छ ?
भिडियो अनुसन्धान अनलाइनबाट
सागर आलेले जलजलाको उपचारका लागी बुझाए यती धेरै रकम ( भिडियो सहित )
इन्दिरा जोशीले लिएर आइन ' रेलीमाई '
गलबन्दी कि गायिका शान्ति श्रीले आफु रुदै सबैलाई रुवाइन, मनै रुवाउने गीत......भिडियो
Previous Article तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आजको राशिफल
Next Article लभ गुरु बनिन अलिसा……….भिडियो
One Comment on “८१ बर्षीय यी आमालाई लगाइयो बोक्सीको आरोप , रुदै पोखिन दर्दनाक पिडा………भिडियो”
मैले पनि यो भिडियो अन्तर्वार्ता पुरा सुन्नै सकिन । के भएको यो देश मा यो देश लाई । यस्ता क थित माता देश भरी छन आधार हिन आरोप लगाएर दुख दिन्छन र आफ्नो ब्यबस चलाउछन । आरोप पनि अलि बलिया धनी लाई लगाउन सक्दैनन यस्तै बृद्धा र निरिह खोज्छन । देश मा कानुन छ तर कस्ले हेर्छ खोइ ।